September 19, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Galkacyo)-Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar ay koox baastoolado ku dileen qof shacab ah gudaha Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, gaar ahaan qaybta Koonfureed ee magaaladaasi.
Dilkaasi oo ka dhacay goob ganacsi gaar ahaan xarun laga dukaamaysto oo uu marxuumka la diley kulahaa xaafadda Wadajir Gaalkacyo ee Koonfurta Galkacyo oo xukuumadda Galmudug ka arrimiso, iyadoona weerarka kadib goobta laga soo qaaday meydka marxuumka.
Allaha u naxariistee marxuumka ayaa waxaa la sheegay in lagu magacaabi jirey Cabdinaasir Maxamed Shire (Seetar), waxaana goobta uu falkaas ka dhacay durbo ka baxsaday raggii hubeysnaa ka dambeeyay falkaas oo watay Bastoolado.
Qaar kamid ah dadka shicibka ah ee ku sugnaa goobta uu dilkaasi ka dhacay ayaa waxaa ay ku warrameen in Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Maamulka Galmudug ee Gaalkacyo ay qaadeen Meydka Marxuum Cabdinaasir Maxamed.
Allaah (swt) ha u naxariisto ninkaas la yiri tuugaa dishay.Wali gaalkacyo waxaa ku dambeeye shabaab sharwadayaal.Insha Allaah waa in la cirib tiraa shabaab iyo inta aaminsa shabaabnimada.
Faanoole fari kama qodna,,, horta waa alxamdulillah in dilkaan yahay kii ugu horeeyay ee aan maqalno 2021 oo sii dhamaan raba,,, awal todobaadkiiba laba mar ama mar ayuu dil dhici jiray,,, laakiin raggaan kama daalayaan inay hadba koox wax disha soo diraan.